လှပလွန်းတဲ့ အလှတရားလေးတွေပေါ်လွင်နေအောင် ရေစိမ်ရင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အလန်း ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
လှပလွန်းတဲ့ အလှတရားလေးတွေပေါ်လွင်နေအောင် ရေစိမ်ရင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အလန်း ဗီဒီယိုလေး
By Shwe BaPosted on February 2, 2021 February 2, 2021
ညှို့အား ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကြောင့် မြင်သူတိုင်း ငေးမောရ သူလေး က တော့ သရုပ် ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ဝါဆိုမိုးဦး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ ဟာ လေ့ကျင့် ခန်း ကို ပုံမှန် လုပ်သူ ဖြစ်တာ ကြောင့် ကိုယ်လုံး လေး က ကျစ်လစ် သွယ်လျပြီး မိန်းက လေး ချင်း တောင် အားကျ နေရ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဆိုဆို ဟာ အမြဲလိုလို လည်း ဖက်ရှင် အမိုက်စား လေးတွေကို ရွေးချယ် ဝတ်ဆင် တတ်သူ ဖြစ်တာ ကြောင့် သူမ ရဲ့ ကိုယ်လုံး အလှတရား တွေကို ပိုမို ပေါ်လွင် နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
ဆိုဆို ဟာ ပွဲ အခမ်း အနားတွေ လည်း အမြဲ လိုလို တက် ရောက် နေရ တာ ပဲဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပွဲတက် ဖက်ရှင် လေးတွေ ဟာ လည်း လူကြား ထဲမှာ ထင်းကနဲ ပေါ်လွင်စေတာ ပါ ။ လတ်တ လောမှာ တော့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ မရှိသေး ဘဲ ချစ်သူနဲ့ အတူ အပန်းဖြေ ခရီးတွေ သွားရောက် လည် ပတ်နေ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ လှုပ်ရှားမှု တိုင်း ကိုလည်း သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမြဲတမ်း ဝေမျှ ပေးနေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အခုမှာ လည်း သူမရဲ့ Facebook Story မှာ ဗီဒီယို လေး တစ်ခု တင်ထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
ဒါ က တော့ ရေကူးကန် ထဲမှာ ညှို့အား ပြင်းပြင်းနဲ့ စိမ်ပြေ န ပြေရေစိမ် ကာ အပန်းဖြေ အနား ယူနေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့အမိုက် စား Video လေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဆိုဆိုရဲ့ အလှ တွေ ဟာ မြင် တွေ့သူ တိုင်း အခါခါ ငေးမော ရလောက်အောင် ဆွဲဆောင် ထားနိုင်တဲ့ ပုံစံ လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထား သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် ဆိုဆို ရဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါတယ် နော် … .
ညႇို႔အား ျပင္းျပင္းနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေၾကာင့္ ျမင္သူတိုင္း ေငးေမာရ သူေလး က ေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ဝါဆိုမိုးဦး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ ဟာ ေလ့က်င့္ ခန္း ကို ပုံမွန္ လုပ္သူ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ကိုယ္လုံး ေလး က က်စ္လစ္ သြယ္လ်ၿပီး မိန္းက ေလး ခ်င္း ေတာင္ အားက် ေနရ တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဆိုဆို ဟာ အျမဲလိုလို လည္း ဖက္ရွင္ အမိုက္စား ေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ ဝတ္ဆင္ တတ္သူ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ သူမ ရဲ့ ကိုယ္လုံး အလွတရား ေတြကို ပိုမို ေပၚလြင္ ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ဆိုဆို ဟာ ပြဲ အခမ္း အနားေတြ လည္း အျမဲ လိုလို တက္ ေရာက္ ေနရ တာ ပဲျဖစ္ၿပီး သူမရဲ့ ပြဲတက္ ဖက္ရွင္ ေလးေတြ ဟာ လည္း လူၾကား ထဲမွာ ထင္းကနဲ ေပၚလြင္ေစတာ ပါ ။ လတ္တ ေလာမွာ ေတာ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြ မရွိေသး ဘဲ ခ်စ္သူနဲ႔ အတူ အပန္းေၿဖ ခရီးေတြ သြားေရာက္ လည္ ပတ္ေန တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ လႈပ္ရွားမႈ တိုင္း ကိုလည္း သူမရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အျမဲတမ္း ေဝမၽွ ေပးေနသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အခုမွာ လည္း သူမရဲ့ Facebook Story မွာ ဗီဒီယို ေလး တစ္ခု တင္ထား တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ဒါ က ေတာ့ ေရကူးကန္ ထဲမွာ ညႇို႔အား ျပင္းျပင္းနဲ႔ စိမ္ေၿပ န ေျပေရစိမ္ ကာ အပန္းေၿဖ အနား ယူေနတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး ရဲ့အမိုက္ စား Video ေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဆိုဆိုရဲ့ အလွ ေတြ ဟာ ျမင္ ေတြ႕သူ တိုင္း အခါခါ ေငးေမာ ရေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ထားနိုင္တဲ့ ပုံစံ ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား သူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ဆိုဆို ရဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးအိမ်တွေ ဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ အလှပုံလေးများ
Next post တင်းကိတ်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ရမ်းခါပြီး အမိုက်စားလေး ကပြထားတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဂွတ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး